Induction Kuchenesa Chigadzirwa chekusunga, kusungunuka, kuwedzera, kusungira, nezvimwe.
musha / high frequency induction heating / Induction Kuchenesa Chigadzirwa
Category: high frequency induction heating Tags: tenga kupisa induction mudziyo, high frequency heater, yakakwirira frequency yekudziya system, high frequency induction heating device, induction kupisa mudziyo, induction heater, induction heat, induction kupisa mudziyo application, induction kudziya mudziyo mutengo, induction kudziyisa zvishandiso, induction kupisa jenareta, induction heat system
Induction Kuchenesa Chigadzirwa Chekushandisa
HLQ Induction Heating Machine Co inogadzira akasiyana siyana induction kudziyisa mudziyo zvigadzirwa kusanganisira yakakura yevashandi nhepfenyuro, mashizha epakati pemagetsi akadai, ultrahigh frequency heater series yekupisa, kusungurudza, kubata, kusungunuka, kusungirirana, kutengesa, kuoma uye kupisa mishonga pamusoro pekushanda uye kushandurwa.
Iyo dzidziso yeiyo induction yekupisa mudziyo
Muaya induction kudziya zvishandiso, akateedzana oscillating wedunhu anoshandiswa, kuburikidza neakakwira frequency shanduko, yakaderera magetsi uye yakakwira magetsi emagetsi zvinobuda kuti ipfuure kuburikidza neiyo induction coil.
DW-HF-15KW uye DW-HF-25KW akateedzana michina ndiwo ekutanga mamodheru akagadzirwa mukambani medu, achishandisa MOSFET uye IGBT zvikamu uye chizvarwa chedu chekutanga chinokanganisa tekinoroji yekudzora, michina yacho inoratidzirwa neyakareruka mamiriro, akakwirira kuvimbika uye mutengo wakaderera, uye zviri nyore kushandisa nekugadzirisa, uye zvino ndiwo michina yakanyanya kushandiswa muChina nekune dzimwe nyika.
MuDW-HF-35KW uye DW-HF-45KW akateedzana induction heat michina, IGBT module uye yedu yechipiri chizvarwa inverting kudzora tekinoroji yakashandiswa, ndiyo mbiri yekudzivirira uye inverting tekinoroji Mune aya matekinoroji matsva, simba rekubuda uye huwandu hwehuwandu hunodzorwa zvakazvimiririra. isu tinoshandisa zvikamu zveGBT uye yakakwira frequency voltage inodzora wedunhu kudzora simba uye isu tinoshandisa IGBT zvikamu, akateedzana oscillating uye otomatiki ekutsvagisa dunhu kusvika kune yakapfava switching mune inverting kosi, zvese izvi zvinoita kuti muchina uve wakavimbika uye unoita muchina ugone kushanda nekuenderera pamwe ne100% basa kutenderera.
Zvichienzaniswa nemichina ine chizvarwa chekutanga tekinoroji, yechipiri chizvarwa tekinoroji inonyanya kukodzera kune makuru magetsi michina kuti iwedzere kuvimbika.
Nekuda kwekutora tekinoroji yepamberi, DW-HF-35KW uye DW-HF-45KW akateedzana michina inogadzirwa neakakura frequency renji, saizi diki, mvura yakatonhorera transformer, kuvimbika kwakakwirira uye kudzikisa mutengo wekugadzirisa.
Mukati meDW-HF-70KW akateedzana induction heating device, Module yeGBTT uye yedu yechitatu chizvarwa inverting control tekinoroji yakashandiswa, ndiyo yakapfava uye mbiri kutonga uye inverting tekinoroji Mune ino tekinoroji, simba rekubuda uye frequency inogona kudzorwa uye kugadziridzwa zvakasiyana, IGBT module uye yakapfava switching control technology inoshandiswa mune yakakwira frequency switching wedunhu kudzora iro rinobuda simba. Mune inverting dunhu, iyo IGBT uye frequency yekutsvaga wedunhu inoitwa kuti uwane yakanyanya kumhanya uye chaiyo yakapfava switching control. Kugamuchirwa kwetekinoroji nyowani hakungogadzirise mhando uye kuvimbika kwemuchina, asi zvakare kugadzirisa dambudziko rekomboni pane simba hombe induction kupisa muchina uye zvinoita kuti zvikwanise kushanda 100% basa kutenderera.